Gọọmenti etiti amachie Sniper | odumblog
Gọọmenti etiti amachie Sniper
posted on Jun. 23, 2019 at 12:10 pm June 23, 2019
Gọọmenti Naijiria enyela iwu maka nrụpụta Sniper n’ihi otu ndi mmadu jiri ya egbu onwe ha.
Ụlọ ọrụ National Agency for Food and Drug Administration and Control (NAFDAC) kwuru na kemikalụ a bụ ihe emepụtara iji nyere ndi na-arụ ọrụ ugbo aka igbu ụmụ ahịhịa, ụfọdụ danda na ụmụ irighiri anụmanụ na-emebi ihe akụrụ n’ugbo. Mana ugbu a, kemikalụ a buzi ihe ndi mmadu ji egbu onwe ha.
Ọtụtụ ndi Naijiria ekpesarala ndi gọọmenti ka ha kwụsị ndi mmadu ire Sniper. E kwukwara na Sniper na-aga ahịa nke ọma maka na ọ na-arụ ọrụ n’igbu ndanda di iche iche ma bụrụkwa ihe dị ọnụala. Nke a mere ndi mmadu ji azụ ya ma na-edobe ya n’ime ụlọ.
Ụlọ ọrụ na-arụpụta Sniper bụ Swiss Nigeria Chemical Company ka gọọmenti nyere iwu ka ha bido ịhọ ndi ha ga-eresị ya bụ kemikalụ na ndi a ga-enye ikikere ire ya. A makwara ọkwa na Sniper abụghịzi ihe a ga-azụta n’ahia dịka ọ siri dị.
Onuorah Jennifer June 23, 2019
Ọnya ndi EFCC amala onye ọcha na-egwu ndi Naijiria wayo
Abiaghi m Nhibe Buhari maka na O ziteghiri m Akwụkwọ ozi – Obasanjo
Odum Blog3 days ago